Облако Mail.ru:Освободи место для новых фотографий 3.14.19.9392 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 3.14.19.9392 လြန္ခဲ့ေသာ2ပတ္က
Application မ်ား ထုတ္လုပ္ႏိုင္စြမ္း Облако Mail.ru:Освободи место для новых фотографий
Облако Mail.ru:Освободи место для новых фотографий ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Android အတွက် တိမ်တိုက် Mail.ru - ဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများ, ဂီတ, တင်ပြချက်များ, စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အခြားဖိုင်တွေကိုသိမ်းဆည်းများအတွက်အခမဲ့ဝန်ဆောင်မှု။ 🏞🎬🎧🗂
တိမ်တိုက် Mail.ru ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးသင့်ရဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုလက်မှာအမြဲရှိလိမ့်မည်။ သင်၏မိုးတိမ် drive ကိုမှဖိုင်တွေနဲ့ဓါတ်ပုံတွေကို Upload လုပ်ပါ, သူတို့ကအလိုအလျှောက်အားလုံးသင့်ရဲ့ Device များပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ 💻📱
ဖုန်းမှ * လွှတ်တင်ခြင်းဓာတ်ပုံများ, ဗီဒီယိုများနှင့်ဖိုင်များကို။ folder တစ်ခုကင်မရာလုဒ်အတွက်မိုဃ်းတိမ် drive ပေါ်တွင်အလိုအလျှောက်ချွေတာရေးတက်သတ်မှတ်မည်။ ယာဉ်အသွားအလာကယ်ဖို့က Wi-Fi ကိုချိတ်ဆက်သောအခါဒေါင်းလုပ်အကြံပြုကြဘူး။ 📲
အားလုံးသင့်ဓါတ်ပုံများနှင့်ဖိုင်များကိုပြီးသားမိုးတိမ်အတွက်တည်ရှိသောကြောင့်, * , သင့်ဖုန်းတွင်အာကာသကိုတက်အခမဲ့ဖြစ်သည်။ 📥
click တစ်ချက်အတွက်သူငယ်ချင်းအသိမိတ်ဆွေတွေနဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူ * ဝေမျှမယ်ဖိုင်များ, ဓါတ်ပုံများနှင့်ဖိုင်တွဲများ ။ 🌇📁
* အအသွားအလာ Save: သင် SMS ကို, အီးမေးလ်, instant messenger သို့မဟုတ်လူမှုရေးset.📱နေဖြင့်ဓာတ်ပုံ, ဗီဒီယိုသို့မဟုတ်စာရွက်စာတမ်းမှ link တစ်ခုပေးပို့နိုင်ပါတယ်
: * Android အတွက်အဆိုပါ Mail.ru တိမ်တိုက်, သငျသညျ (AVI, MKV, mp4 MOV, WMV အပါအဝင်) ဓါတ်ပုံများနှင့်လူကြိုက်များကို formats ၏ဗီဒီယိုများကြည့်ရှုနိုင် အဖြစ်သီချင်းနားထောင်။ playback device ကိုမှဖိုင်ကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲခြင်းမရှိဘဲ, အစစ်အမှန်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာပြင်ပpleere.🎬တစ်ဦးကဗီဒီယိုဖိုင်ဖွင့်လှစ်ဖို့လည်းဖြစ်နိုင်
(အချို့မော်ဒယ်အပိုဆောင်း software ကို၏ installation လိုအပ်) အခြားပုံစံများဖြင့် * အမြင်စာရွက်စာတမ်းများနှင့် files တွေကို ။ 🗂📂
* ဘယ်နေရာမှာမဆိုကမ္ဘာပေါ်မှာမှသင်၏ဖိုင်တွေနဲ့ဓါတ်ပုံတွေကိုစီမံခန့်ခွဲ - ကိုအမည်ပြောင်း, delete, ဖိုလ်ဒါအကြားသူတို့ကိုရွှေ့။
* အခြားအသုံးပြုသူများ အတူမျှဝေဖိုလ်ဒါ Create နှင့်အတူတူသူတို့ကမည်သည့်ဖိုင်များကိုထည့်ပါ။ ပါတီတစ်ခုသို့မဟုတ်ခရီးစဉ်ကနေတူညီတဲ့ folder ထဲမှာသူငယ်ချင်းများကိုဓါတ်ပုံအားလုံးကိုအတူစုဝေးစေ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်အတူတစ်ဦး shared folder ကို အသုံးပြု. စာရွက်စာတမ်းများနှင့်အတူအုပ်စုဖြင့်အလုပ်လုပ် Organize ။ ခြုံငုံမိသားစုအယ်လ်ဘမ်ထဲမှာရှိသမျှကိုအမှတ်ရစရာအဖြစ်အပျက်များနဲ့ရငျးနှီးတဲ့ထားပါ။ 🖼
* လုံခြုံတဲ့သိုလှောင်မှုအတွက်အရေးကြီးတဲ့ဖိုင်တွေကို Keep! သင့်ရဲ့ PC မှာသို့မဟုတ်ဖုန်းပေါ်တွင်သင်၏ drive ကိုမှဖြစ်ပျက်သမျှ , မိုးတိမ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့ဖိုင်တွေအားလုံးကိုသငျနှငျ့အတူနေဖို့ပါလိမ့်မယ်။ 🔐
အခွန်၏လိုအပ်သော အကယ်. * သင်ကယင်း၏မိုဃ်းတိမ်ကိုစီး၏အသံအတိုးအကျယ်ကိုတိုးမြှင့်ပေးနိုင်သည်။ စာရင်းလျှောက်လွှာဘက် bar မှာဖြစ်ပါတယ်။ 📋
* လျှောက်လွှာတိမ်တိုက် Mail.ru ကို Android ပေါ်အခြေခံပြီး စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet များအတွက်ရရှိနိုင်ပါသည်။ 📲
* သင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အားလုံးသည် မဆိုဝါယာကြိုးများ, flash drive ကိုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ကဒ်မလိုအပ်ပါဘူး - ။ ဒီအခမဲ့ app ကိုတိမ်တိုက် Mail.ru နှင့်အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်။
ဒီ app ကိုစမ်းသပ်နှင့် Android ဗားရှင်း 5.0 နှင့်အထက်နှင့်သဟဇာတဖြစ်ခဲ့သည်။
Облако Mail.ru:Освободи место для новых фотографий အတြက္ စတိုးအသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Облако Mail.ru:Освободи место для новых фотографий အား အခ်က္ျပပါ
g920f စတိုး 87 33.74k
Облако Mail.ru:Освободи место для новых фотографий ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Облако Mail.ru:Освободи место для новых фотографий အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 3.14.19.9392
ထုတ်လုပ်သူ Mail.Ru Group
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://cloud.mail.ru/privacy/
App Name: Облако Mail.ru:Освободи место для новых фотографий
Release date: 2019-09-09 07:47:58
လက်မှတ် SHA1: DA:A4:E5:D1:B0:55:CD:CE:8C:DF:29:7E:41:22:38:A3:47:6E:70:CF
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Boris Nikiforov
အဖွဲ့အစည်း (O): Mail.ru
နယ်မြေ (L): "Moscow
Облако Mail.ru:Освободи место для новых фотографий APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ